Tronsmart ONYX PRIME, uhlalutyo kunye nokusebenza | Iindaba zegajethi
URafa Rodríguez Ballesteros | 26/12/2021 14:00 | ngokubanzi, Reviews
Ngaba ujonge ii-headphones ezingenazingcingo? Njengoko usenokuba ubonile, oku akungomsebenzi ulula, unikwe inani elikhulu lezinto onokukhetha kuzo ngoku kwimarike. Ke ngoko, ukukunceda kumsebenzi wokufumana ekugqibeleni ii-headphones ozifunayo, namhlanje sizisa i-Actualidad Gadget entsha, inketho enomdla, i-Tronsmart ONYX PRIME.
Siye sakwazi ukuvavanya ezi headphones ze-Tronsmart iintsuku ezimbalwa kwaye emva koko siya kukuxelela konke malunga namava ethu okusebenzisa, iimpawu esinokuzifumana kunye nexabiso onokuthi ufumane enye ukuba zikhethiweyo.
2 Le yiTronsmart ONYX PRIME
3 Iimpawu ezinikezelwa yi-Tronsmart ONYX PRIME
Njengoko sihlala sisenza, sikubonisa yonke into ukuba sinokuyifumana ngaphakathi kwebhokisi ye-ONYX PRIME nguTronsmart. Njengamaxesha onke, sinokuthi kwakhona asifumananga nto imangalisayo. Sinezethu Iifowuni zentloko, i ityala lokutshaja, un ngezandla umsebenzisi kunye Uhlobo C intambo ye-UBS ukutshaja ibhetri kwityala.
Thenga i Tronsmart ONYX PRIME kwiAmazon ngexabiso elifanelekileyo
Kwabanye, nathi sifumana iseti yeepads ezongezelelweyo uhlengahlengiso lwe-headset, ukuba nobukhulu obuthathu obahlukeneyo, kunye nale iqhotyoshelweyo. Ukongeza, nathi sinako amanye amabini "amakhonkco erabha", yobukhulu obuhlukeneyo, obusebenzela ukufezekisa ukulungelelaniswa okungcono kwe-headset ngaphakathi kwendlebe.
Le yiTronsmart ONYX PRIME
I Tronsmart ONYX PRIME babe ifomathi "endlebeni", kodwa banezinto ezingaqhelekanga kuyilo lwabo apho abambalwa abavelisi bagqibe kwelokuba bancedise ii-headphones zabo. Njengezinye iimodeli ezininzi, ezi headphones zeTronsmart bonisa iipads zeendlebe eziphikisanayo ehlala ngaphakathi endlebeni kwaye umsebenzi wayo ikukwenza i-vacuum effect. Kule nto siyifumana iisayizi ezintathu ezahlukeneyo.
I-ONYX PRIME nayo inenye iringi yerabha eyongezelelweyo leyo ikwisiphelo esichaseneyo somboko. Unceda pukuze i-handset ilungiswe ngakumbi ezindlebeni zethu nokuba ayinakushukuma okanye siwe. Intwana eyongezelelweyo eyenza ukuba a ukhetho oluhle ukuba ufuna ii-headphones ukuba zihambe nawe ngexesha lomsebenzi womzimba imidlalo. I-accessory esele siyibonile kwezinye iimodeli kwaye emva kokuyizama sinokungqina ukuba bayayifeza injongo yabo. Sikwanjalo iisayizi ezintathu ezahlukeneyo ukuze ulungelelwano luphelele. Ngaba yile nto ubuyifuna? Fumana eyakho Tronsmart ONYX PRIME kwiAmazon ngokuhambisa simahla.
Ii-headphone zine- ubungakanani be compactZincinci esandleni kwaye ngakumbi xa sizinxiba. Izinto zokwakha, kwi Iplastiki ebengezelayo, yaye ubunzima obuncinane enabo benza ukuba singaqapheli ukuba sizinxibile. Into ebaluleke kakhulu kwabo bayisebenzisa iiyure okanye xa bedlala imidlalo.
Kwinxalenye engaphandle kwendlebe, ngaphezulu nje kwelogo yefemu, i ulawulo lokuchukumisa. Ngabo sinako lawula ukudlala umculo, tsiba iingoma uye phambili okanye ngasemva, nqumama okanye uqalise ukudlala. Kwakwindawo enye sifumana a imayikrofoni eza kusetyenziswa ukulawula ukucinywa kwengxolo esebenzayo. Kwaye emazantsi, sinayo a ukukhanya okukhokelwayo isixelela ukuba uxhulumaniso luyasebenza, okanye inqanaba lebhetri leseti yentloko nganye.
El ityala lokutshaja, apho i-headphones iphumla ukutshaja, nayo yenziwe ngeplastiki emnyama, kulo mzekelo ngokugqitywa kwe-matte. Ii-headphones zihambelana ngokugqibeleleyo nombulelo kwi-os izikhonkwane zemagneti. Kwaye banikela ukuya kuthi ga kwiintlawulo ezintathu ezongezelelweyo ukuze ukuzimela kwe I-ONYX PRIME iyakwazi ukuqhubeka nathi. Ungathenga ngoku kwiAmazon Tronsmart ONYX PRIME elona xabiso libalaseleyo.
Iimpawu ezinikezelwa yi-Tronsmart ONYX PRIME
La inkululeko Ngomnye wemiba esinokuyiqwalasela ebaluleke kakhulu xa sisenza isigqibo ngemodeli enye okanye enye. Siye savelisa kwakhona umculo waqhubeka ukuya kutsho kwiiyure ezisibhozo kumthwalo ngamnye. Y iyonke ukuya kwiiyure ezingama-40 ukuba sinetyala lokutshaja.
La uqhagamshelo lelinye lamandla abo njengoko bexhotyiswe ngeteknoloji Bluetooth 5.2. Uqhagamshelwano olukhawulezayo nolungenamthungo ngamaxesha onke. Kwaye enkosi Chip yeQualcomm 3040, sifumana umgangatho wesandi ophuculweyo owenza amava okuphulaphula abonakale ngcono.
Sikwanayo itekhnoloji ephuculweyo yeTekhnoloji ye-Wireless Stereo Plus. Iyakwazi ukulawula ukuba ukusetyenziswa kwee-headphones ezimbini kulungelelaniswa. Kwaye izisa uphuculo oluphawulekayo kuzinzo loqhagamshelwano. Kwakhona ukubala kwi Ukurhoxiswa kwengxolo esebenzayo kuneQCC3040 chip inikeza amava omsebenzisi awanelisayo kakhulu.
La umgangatho ozwakalayo Banikezela ngaphezu kokulindela.
Ukuzimela ukuya kuthi ga kwiiyure ezingama-40 ngaphandle kwesidingo seeplagi.
Uyilo ogqibeleleyo ezemidlalo.
Tamaño yecala lokutshaja kunye nee-headphones ngaphezulu komndilili.
La irabha yokulungelelanisa Isenokungakhululeki, nangona kubalulekile ukuba ubungakanani buchanekile.
Ithunyelwe nge: I-26 ngoDisemba 2021
Utshintsho lokugqibela: I-25 ngoDisemba 2021
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Tronsmart ONYX PRIME, uhlalutyo kunye nokusebenza